7Burn ဖို့ 's | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! 7Burn ဖို့ 's | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
7Burn ဖို့ 's
အားလုံးကတော့ slot ကစက်တွေအမျိုးမျိုးသောဆုကြေးငွေကျည်သယ်, အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေနှင့်တောရိုင်း. 7'' Burn ဖို့ s ကိုအလွန်ကောင်းစွာဂန္ဆောင်ပုဒ်ကိုကိုယ်စားပြုတထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းတဲ့မိုဘိုင်း slot နှစ်ခုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်.
Burn7၏ Developer တွေအကြောင်း
သိပ္ပံနည်းကျအားကစားပြိုင်ပွဲသာလွန်နည်းပညာ၏အရာ၌ဝါကြွားနှင့်ကစားသမားမှစိတ်လှုပ်ရှားပူဇော်ရသော slot နှစ်ခုထောက်ပံ့. အဆိုပါကုမ္ပဏီလမ်းကိုပြန်အတွက်လုံခြုံတဲ့လက်ငင်းထီဂိမ်းကိုဖန်တီးရန်ပထမဦးဆုံးတစျခုဖွစျသညျ 1974.
ဒီအွန်လိုင်း slot ကကကမ်းလှမ်းအဆိုပါလောင်းကစားအကွာအဝေးမှ 25p ဖြစ်ပါသည်2လှည့်ဖျားမှ. ထို့အပြင်, သငျသညျကုန်ကျမယ်လို့မင်္ဂလာပါကြိတ်စက်လှည့်ဖျား၏ရွေးချယ်မှုများ 20 အပိုအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ငါးလှည်. သုံးဦးသာ reels နှင့်ဒီအွန်လိုင်း slot ကငါးပုံသေအနိုင်ရရှိလိုင်းများရှိပါတယ်. သင်္ကေတအများစုဟာအားလုံးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လိမ္မော်သီးများပါဝင်သည်, ချယ်ရီသီး, ဖရဲသီး, နှစ်ဆဘား, ကြယ်များ, ခေါင်းလောင်းထိုး, ဆီးသီး, ရှောကျသီး. အပြင်ကဤ icon များအနေဖြင့်, တစ်ဦးလည်းမရှိ 77 အနီရောင်အရောင်လည်းပူပြင်းတဲ့မီးလောင်ရာအတွက်အိုင်ကွန် 77 အိုင်ကွန်. ပုံမှန်နှစ်ဦးစလုံး 77 သင်္ကေတများနှင့်မီးလောင်ရာ 77 လွင်ပြင်အဖြစ်သင်္ကေတလုပ်ရပ်, ရှိသမျှသည်အခြားသောသင်္ကေတများအဘို့အစား. နှစ်ခုအကြားအဓိကဆနျ့ကငျြဘသူတို့ပူဇော်နိုင်ငွေဖြစ်ပါသည်. ပုံမှန်နေစဉ် 77 အိုင်ကွန်သင်တစ်ဦးရရှိသွားတဲ့ 100 တစ်ဦးအနိုင်ရရှိလိုင်းပေါ်မှာသူတို့ထဲကသုံးလေယာဉ်ဆင်းသက်မှုအတွက်ကြိမ်ထီပေါက်, မီးလောင်ရာ 77 အိုင်ကွန်ဆုသင်တစ်ဦး 250 တစ်ဦးအနိုင်ရရှိလိုင်းပေါ်တွင်သုံးရတဲ့အတှကျအကြိမ်ထီပေါက်. အခြားအွန်လိုင်းဂိမ်းမတူဘဲ, ဒီမှာသူတို့ကမည်သည့်အပိုဆောင်း feature ကိုကစားချင်တယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူကစားသမားဖြစ်ပါတယ်.
ဒီအွန်လိုင်း slot ကအတွက် optional ကိုအပို features ပါ:
1. မင်္ဂလာပါကြိတ်စက်လှည့်ဖျား- ဤရွေ့ကားမြင့်မားသောစွမ်းအားလှည့်ခြင်းများကိုသင်ကစားပွဲစံထက်ပိုကုန်ကျခြင်းနှင့်သင်ပုံမှန်ဆု၏ထက်ဝက်ရရှိမည်. သို့သော်, ငါးပါးမင်္ဂလာပါကြိတ်စက်လှည့်ဖျားမီးလောင်ရာရှိသည်အဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားအနိုင်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းများကိုရတဲ့၏ကြီးမြတ်သောအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ 77 ရှိသမျှသည်အခြားသော icon များအဘို့အစား icon များ.
2. Gamble Feature ကို- တစ်လှည့်ဖျားနေစဉ်အတွင်း, အဆိုပါကစားသမား Gamble option ကိုယူရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်. ဒီ option ကိုယူ, တစ်လှည့်ဖျားတိုးတက်မှုအတွက်အခါရိုးရှင်းစွာ Gamble button ကိုဝင်တိုက်. သင်အနိုင်ရပါက 2x ပေးချေမှုရနှင့်သင်အနိုင်ရမရကြပါလျှင်, ထို့နောက်ဘာမျှပြောင်းလဲ.
ဒီအွန်လိုင်း slot ကသူတို့ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်မဆုကြေးငွေအဘို့အသွားချင်လျှင်ကစားသမားခေါ်ဆိုမှုယူခွင့်ပြုသည့် Uncomplicated ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုဘိုင်း slot နှစ်ခုကကမ်းလှမ်းကစားသမားရာခိုင်နှုန်းဖို့ပြန်လာ 95.10%.
ထီပေါက် Jester တောရိုင်းအလုပ်မလုပ်